believe it or not | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » believe it or not
Posted by intro on Jul 5, 2010 in News |2comments
(၁) ဂျာမနီ နိုင်ငံ ဟမ်းဘတ် မြို.က ဒေါက်တာ ရုဒေါ့ဖ်ဗီယက်သီးစ် ဟာ ၁၅၂၁ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ.ပထမဦးဆုံး အမျိုးသား သားဖွားဆရာဝန် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ကလေးမွေးရာမှာ အခက်အခဲဖြစ်လို. သူ မိန်းမ တစ်ယောက်လို ဟန်ဆောင်ပြီး ကူညီ မွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလို ကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက် ဆုလာဒ်ကတော့ ၀မ်းနည်းစရာပါပဲ ….။ သူ.ကို တိုင်မှာချည်ပြီး မီးရှို.သတ်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ် ။
(၂) တစ် ကနေ တစ်သန်းထိ အစဉ်လိုက် ရေတွက်မယ်ဆိုရင် အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ထင်ပါသလဲ ။ ဒီစာကို ဆက်မဖတ်သေးဘဲ အချိန် ဘယ်လောက်ကြာနိုင်မလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ ။ သွားမစမ်းလိုက်လေနဲ့ မိတ်ဆွေ …။ မစားမသောက် မအိပ် ပဲ ရွတ်မယ်ဆိုရင်တောင် ဆယ်ရက် နဲ့ ဆယ်ည ကြာတဲ့ထိ မပြီးနိုင်ပါဘူး ။
(၃) Anno Domini ( AD ) ဆိုတဲ့ ခရစ်သက္ကရာဇ် ကို ခရစ်တော် မွေးဖွားတဲ့ နှစ်မှ စတွက်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အမှန်တော့ AD တစ်ခုနှစ် မတိုင်မီ လေးနှစ်( BC4ခုနှစ်) လောက်ကတည်းက ခရစ်တော်ကို ဖွားမြင်တော်မူခဲ့တာပါ ။
(၄) ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက အင်္ဂလန်မှာ ဘုရင့် ရဲ့အမိန့် မရပဲ ပြည်သူပြည်သားတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံခွင့်ရှိကြပါဘူးတဲ့… သူတို့ဟာ ကလေးလိုချင်ရင် ဘုရင့်ခွင့်ပြုချက်ရမှ…အဲဒီခွ င့်ပြုမိန်. စာလွာကို အိမ်တံခါးဝမှာချိတ်ပြီး လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရပါတယ်လို. သိရပါတယ် ။ ဗဟုသုတ အနေနဲ.ပြောပြပါ့မယ် ။ အဲဒီ ခွင့်ပြုမိန်. ကတော့ဒီလိုလေးပါ… ” Fornication Under Consent of the King ” (*****)
(၅) သစ်ခွပန်းဟာ ဘီယာ ကြိုက်တယ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေတို.သိပါသလား။ အတည်ပြောတာပါ ။ သစ်ခွပင်တွေကို ဘီယာ တစ်ဆ ရေခြောက်ဆ နဲံ တိုက်ကျွေးပေးရင် အပင်ကို ရှည်ထွက်နှုန်း ပိုကောင်းပြီး ပိုလည်း သန်မာစေပါတယ် ။ နှစ်ရက်ခြား တစ်ခါလောက် ကျွေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ် ။ ( သစ်ခွပင် စိုက်ထားတဲံသူများ စမ်းကြည့်ပါ ။ဒါ အမှန်ပါ ။ အာမခံပါတယ် ။)
(၆) ၀င်ရိုးစွန်း အာတိတ်ဒေသမှာ ဒီဇင်ဘာလ တစ်လလုံး ည ချည်းသာဖြစ်နေပါတယ် ခင်ဗျာ… နေ. အချိန်လုံးဝ မရှိပါဘူးတဲ့ ။ (
၇) ခြင်တစ်ကောင် တောင်ပံခတ်တဲ့ နှုန်းဟာ တစ်စက္ကန်.ကို အကြိမ် တစ်ထောင်ရှိပါတယ်တဲ့ ခင်ဗျ .. ကျနော် စိတ်ထင်တော့ ဒါဟာ တောင်ပံ ခတ်တာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ တုန်ခါမှု (vibration) နဲံ ပျံသန်းတာမျိုး ဖြစ်မှာပါ ။
(၈) ပန်းခြံတွေမှာတွေ့ ရတဲ့ မြင်းစီးစစ်သည်ရုပ်တုတွေ သေချာကြည့်ကြည့်ပါ ။ မြင်းရဲ့ခြေထောက် တစ်ဖက်ဟာလေထဲမှာရှိနေရင် အဲဒီစစ်သည်ဟာ စစ်ပွဲမှာ ရတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့် သေတာကိုရည်ညွန်းပါတယ် ။ ခြေထောက် နှစ်ဖက် လေထဲမှာ ရှိနေရင် စစ်ပွဲမှာကျတာကို ရည်ညွန်းပါတယ် ။ ( စစ်သူကြီး ဗန္ဓုလ ရဲ့ ရုပ်တု ကိုကြည့် ကြည့်ပါ ) မြင်းခြေထောက် လေး ဖက်စလုံး မြေပေါ်မှာ ရှိနေရင်တော့ ရိုးရိုးသေတာပါ ခင်ဗျာ။ (အဲ… ခြေထောက်လေးဖက်လုံး လေထဲမြှောက်နေတာကိုတွေ.ရင်တော့ ဒါဟာ Angel စီးတဲ့မြင်းပျံလို.ပဲ မှတ်လိုက်ပါ သယ်ရင်း…ငှဲ..ငှဲ..)
(၉) ပုဂံမင်းစော ” အနော်ရထာ” ဟာ ကျွဲရိုင်း အခွေ.ခံရလို. နတ်ရွာစံခဲ့တာပါ ။ ( မဟာရာဇ၀င်ကြီး ပထမတွဲ မှာတော့ အနော်ရထာမင်းကြီး ကို နတ်ရွာစံအောင် ခွေ.ခဲ့တဲ့ ကျွဲရိုင်းသည် ကျွဲ စင်စစ်မဟုတ် ၊ အနော်ရထာမင်းစောအပေါ် အညှိုးအတေးထားခဲ့သော ထိန်ပင်စောင့် နတ်ဘီလူးသာဖြစ်သည် ။ နတ်ဘီလူး က ကျွဲယောင်ဆောင်ပြီး ခွေ.ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ။ ( မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း တွဲ – ၈ / စာ – ၂၈၄ ) )
(၁၀) ပုဂံခေတ်က စိုးစံခဲ့တဲ့ ” နရသီဟပတေ့မင်း ” ကို မိတ်ဆွေတို. သိကြမယ် ထင်ပါတယ် ။ သူ.ရဲ့ နာမည် ရင်းက ” မင်းခွေးချေး ” ပါခင်ဗျ ။ သူ.အဖေ ” ဥဇနာမင်းကြီး “နတ်ရွာစံတော့ သူ. ကို ” နရသီဟပတေ့မင်း ” ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ ပေးပြီး မင်း အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တာပါ ။ (မတရားပြောတယ်မထင်ပါနဲ့ ။ပုဂံမင်းများရာဇ၀င်မှာ ရှာဖတ်နိုင်ပါတယ် ။)
FORWARD MAIL တစ်ခု မှနေကူယူထားတာပါ။
Believe it or not the lounge at General Than Shwe’s residence hasasingle chair that is for him while visitors are forced to sit on the ground. Visitors must follow the royal communication protocol when they meet General Than Shwe and is family at their house.
တချို့ဟာတွေက ထူးဆန်းတယ်နော် ။